“Lama Ogolaan Karayn” Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Ku-Celintii Isku-aadka Champions League - Laacib
HomeWararka Champions League“Lama Ogolaan karayn” Jurgen Klopp oo Ka Hadlay Ku-Celintii Isku-aadka Champions League
“Lama Ogolaan karayn” Jurgen Klopp oo Ka Hadlay Ku-Celintii Isku-aadka Champions League
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp ayaa ka hadlay khalkhalkii ka dhacay isku-aadka wareegga 16ka Champions League, kaas oo sababay in laba jeer la sameeyo isku aadka iyadoo la kansalay midkii hore.
Liverpool ayay layaab ku noqotay in si badheedh ah loogu diiday inay ku beeganto Villarreal, waxaase mar dambe sharraxaad bixisay UEFA oo u muuqatay inay ka qancisay cabashada.
Markii lagu celiyey isku-aadka, Liverpool ayaa ku dhacday Inter Milan, halka ay markii hore isku beegneen RB Salzburg oo awoodahaan ka hoosaysa kooxda Talyaaniga ee ay haddalaciyaarayaan.
Tababare Jurgen Klopp ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sharraxay sidii uu u arkayay wixii dhacay iyo fikirkiisa aaddan in lagu celiyo isku aadka.
Waxa kale oo uu soo qaaday inay isku dhaceen Inter Milan oo uu dib ugu laabanayo garoonka San Siro Stadium oo toddobaadkii hore ay AC Milan kula soo ciyaareen kulankii ugu dambeeyey wareegga group-yada, kaasoo ay guul kazoo hooyeen.
Tababaraha reer Germany ayaa yidhi: “Si toos Ayaan u daawanayay isku aadka iyo wixii dhacay, waxaanan is idhi ‘Sidan laguma deyn karo, wax fursad ah oo uu isku aadku sidanku ahaado ma jirayso’. Way ku qasbanaayeen inay ku celiyaan isku aadka.”
Klopp waxa kale oo uu soo qaaday in kooxdiisu ay la ciyaari doonto Inter Milan, wax dhibaato ahna kamaanu soo qaadin, waxaanu yidhi: “54 sannadood ayaan sugayay in aan markaygii ugu horreysay ku ciyaaro San Siro, haddana markii labaad ayay noqonaysaa muddo saddex bilood ah, markaa waa war wanaagsan.
“Dabcan waa kooxda horyaalka Talyaaniga hoggaaminaysa, waana koox wanaagsan waqtigan,hase yeeshee waynu arki doonaa sida ay wax noqdaan illaa bisha February oo aanu kulmayno.
Waxa kale oo uu soo qaaday khatarta ay kooxdiisu la kulmi karto, waxaanu yidhi: “Haa, waxay haystaan ciyaartooyo heer caalami ah, sida Sanchez iyo Dzeko, laakiin Lautaro Martinez waxa uu ka mid yahay weeraryahannada ugu wanaagsan dunida.”